Gịnị bụ ihe El Niño | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ El Niño?
Na mbara ala ebe mmiri juputara na 75% nke elu ya, oke osimiri na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịchịkwa ihu igwe nke ụwa dum, site na mkpirisi ruo ebe okpomọkụ. Ma ọ dị ebe ahụ, na mmiri mmiri nke ebe ọwụwa anyanwụ Pacific, ebe ihe onodu ubochi na-aputa nke na-amalite site n'itinye aka na mpaghara, ma na-enwe nsogbu na uwa dum: El Niño.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe ọ bụ na otu o si emetụta ihu igwe ụwa ya mere inwere ike ịmụtakwu banyere oké osimiri na mmetụta ha nwere n'akụkụ niile nke ụwa anyị.
1 Kedu ihe bụ El Niño?
2 Kedu ka esi achọpụta ihe a?
3 Kedu mmetụta ọ nwere na ihu igwe?
4 Mmekọrịta dị n'etiti El Niño na mgbanwe ihu igwe
El Niño Ọ bụ ihe omuma nke metụtara mmiri nke mmiri nke Pacific dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, nke cyclical, nke na-eme kwa afọ atọ ma ọ bụ asatọ ma na-ewe ọnwa 8-10. Ọ bụ oge na-ekpo ọkụ nke usoro ikuku ihu igwe Pacific a na-akpọ El Niño-Southern Oscillation, ENSO maka acronym ya na Bekee. Ọ bụ ihe ịtụnanya na-ebute oke mbibi na mbibi dị egwu na mpaghara etiti na mpaghara ikuku, ọkachasị n'ihi oke mmiri ozuzo.
Ndị ọkụ azụ na Peruvian kpọrọ ya aha ahụ na-ezo aka na nwa ọhụrụ Jesus, kwa afọ kwa afọ mmiri na-ekpo ọkụ na-apụta n'oge Krismas. Ọ bụghị na 1960 ka achọpụtara na ọ bụghị mpaghara Peruvian, mana na ọ bụ n'ezie na-arụpụta ihe niile na-ekpo ọkụ na Pacific na mba ọzọ.
O dobeghị anya etu ihe a si amalite, mana ọkà mmụta ihu igwe Jacob Bjerknes (1897-1975) jikọtara oke okpomọkụ nke elu oke osimiri na ifufe na-esighi ike site n'ọwụwa anyanwụ na oke mmiri ozuzo so ha.
Mgbe e mesịrị, ọkà mmụta ihu igwe ọzọ aha ya bụ Abraham Levy kwuru nke ahụ mmiri mmiri, nke dị oyi n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, na-ekpo ọkụ na n'ihi ya, ikuku ikuku na-abawanye. Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na-aga n’oké osimiri, site na Australia ruo Peru.
Kedu ka esi achọpụta ihe a?
Dika o nwere nsonazụ nke nwere ike ibibi, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe sistemụ iji chọpụta ya n'oge. Ya mere, enwere ike ịme ihe dabara adaba iji zere ọnụọgụ kachasị nke ọnwụ. Maka ya, Satellites, mmiri buoys na-eji ma na-enyocha oké osimiri ịmata ọnọdụ ọnọdụ oke osimiri dị na mpaghara ikuku ụwa. Na mgbakwunye, a na-enyocha ikuku n'ihi na, dịka anyị kwuburu na mbụ, mgbanwe ikuku nwere ike ịbụ ihe ngosi na ihe El Niño na-aga ime.
Kedu mmetụta ọ nwere na ihu igwe?
El Niño, ihe omuma ndi n’agha kemgbe millennia, nwere mmetuta di uku n’ebe uwa di. N'ezie, taa, ọ nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara nke na, n'ihi uto nke ụmụ mmadụ, ọ na-aghọ ngwa ngwa na mba ndị emetụtara nwere ike ịme usoro dị irè iji nagide mmetụta ya. Ma ọ bụ na, mgbe mmepe ya, mgbanwe na okpomoku na usoro mmiri ozuzo na ikuku n’eme n'ime ụwa.
Ka anyị mara ihe mmetụta ya bụ:
Gburugburu ụwa: ihe ndekọ nke okpomọkụ, mgbanwe nrugharị nke ikuku, mpụta nke ọrịa na-esiri ike iwepụ (dị ka ọgbụgbọ na ọnyụnyụ), ọnwụ osisi na anụmanụ.
Na South America: Mbelata nke ikuku ikuku, ikpo ọkụ nke Humboldt Ugbu a na oge dị oke mmiri n'oge mmiri ozuzo na-adị oke mmiri.
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia: igwe ojii dị ala, oke ọkọchị na mbelata nke oke osimiri.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa iburu nke ahụ ama enweghị El Niño abụọ. Nke a pụtara na mpaghara ndị emetụtara na oge gara aga nwere ike anaghị emetụta ọzọ. Ha ga-enwe ihe ịga nke ọma karị, ee, mana ị nweghị ike ịma n’ezie.
Mmekọrịta dị n'etiti El Niño na mgbanwe ihu igwe
Ọ bụ ezie na amabeghị kpọmkwem mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-emetụta ihe El Niño, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị rụtụrụ aka na a ọmụmụ bipụtara na akwụkwọ akụkọ Nature na 2014 na oge nke ihe ahụ, yana ike ya, nwere ike ịbawanye ka ụwa na-ebili elu ụwa dum. Agbanyeghị, otu gọọmentị etiti na-ahụ maka mgbanwe ihu igwe (IPCC) anaghị ele njikọ a anya ka egosipụtara, n'ihi gịnị?
Azịza ya bụ na mgbe anyị na-ekwu maka mgbanwe ihu igwe anyị na-ekwu maka ọnọdụ ihu igwe, ebe ihe ngosi El Niño bụ mgbanwe dị n'okike. Otú ọ dị, e nwere ndị ọzọ na-amụ gbasara ihu igwe, dị ka Jorge Carrasco, bụ ndị kwenyere n'ọmụmụ ihe ahụ na n'ime ụwa na-ekpo ọkụ, ike na ugboro ole El Niño ga-amụba.
Dị ka anyị hụworo, El Niño bụ ihe ịtụnanya nwere ike inwe ọtụtụ nsogbu dị mkpa n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Maka nchekwa anyị, ọ dị mkpa iji belata ikuku gas na-ekpo ọkụ iji gbochie ọnọdụ okpomọkụ ka ọ ghara ịrị elu, n'ihi na ọ bụrụ na anyị emeghị, na mgbakwunye na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, anyị ga-echebe onwe anyị pụọ na nsogbu El Niño siri ike karị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ El Niño?
Ebili mmiri Kelvin na - emezi ngwa ngwa nke Antarctica
Donald Trump nwere ike gbanwee iwu ihu igwe ya!